Tim Cook haapo kubva pane runyorwa rwevanonyanya kubhadharwa maCEO | Ndinobva mac
Tim Cook haapo kubva pane runyorwa rwevakuru vanobhadharwa maECO
Apple ndiyo inonyanya kukosha kambani pasi, asi kana zvasvika pakubhadhara maECO, Tim Cook ari pachena asipo pane yazvino runyorwa rwe mazana maviri akabhadharwa-soro maECO MuUSA. Mune chidzidzo chakaitwa ne 'New York Times', avhareji muripo pakati pevakuru vatungamiriri muna 2015, chaizvo yakaderera 15% muna 2015 kusvikira wasvika $ 19,3 mamirioni avhareji kana iwe uchishanda mune kambani ine zvirinani $ 1 bhiriyoni pamari yegore negore. Cook akabhadharisa zvakadarika izvo munguva yakapfuura, asi gore rino haatombocheka iyi avhareji.
Chidzidzo chakawana kuti kekutanga kubva 2011, hapana CEO akambounganidza anodarika $ 100 miriyoni, nemubhadharo wakakwira kwazvo wauinayo Dara Khosrowshahi anobva kuExppedia, iyo iyo $ 94,6 mamiriyoni gore rapera. Leslie Moonves kubva kuCBS akawana nzvimbo yechipiri kunyangwe akabhadharisa anenge madhora makumi mana emadhora.
Kunyangwe asina kuoneka zvine mutsindo pane runyorwa gore rino, Cook anga aine makore ekuva anotungamira zvakanyanya. In 2012 ndiye akabhadharwa mari yepamusoro munyika, achihwina $ 94 mamirioni mugore rayo rekutanga. Iwe haugone kubhadharwa saizvozvo gore rega rega, asi zvinokwanisa kuita iyo 'Nguva' yepamusoro zana zana.
Chidzidzo ichi chakangotarisa pane izvo maECO akawana, asi kana iwe ukawedzera vamwe vatungamiriri, senge mamwe emhangura yeApple, Angela Ahrendts aive nemubhadharo we $ 73 mamiriyoni panguva yegore rake rekutanga kuApple, nepo vamwe vatungamiriri vakaita Eddy Cue, Jeff Williams naPhil Schiller wakunda kudarika $ 20 mamiriyoni mamwe makore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Tim Cook haapo kubva pane runyorwa rwevakuru vanobhadharwa maECO
Mazuva matatu naTim Cook: uyu ndiye CEO weApple
HiRise iMac mira wongororo kubva gumi nemaviri maodzanyemba